Ogaden News Agency (ONA) – Maamulkii hore ee Jaaliyada Soomaalida Ogadenia ee Sweden oo xilwareejin sameyay + Sawiro
Maamulkii hore ee Jaaliyada Soomaalida Ogadenia ee Sweden oo xilwareejin sameyay + Sawiro
Magaalada Stockholm ee caasimada wada ka Sweden Waxaa kadhacay xaflad xilwareejina Taas oo ay kasoo qayb Galen Gudiga cusub ee xilka Lawareegayay iyo gudidii hore sidoo kale Waxaa iyana kasoo qayb galay masuuliyin katirsan Jabhada ONLF oo ay kamid Ahaayeen.
Muxamed Rayaale Xaamud iyo Abdi Nasir gadhwayne Sidookale Waxaa munasabadan kasoo qayb galay Gudoomiya yaasha Ururada dhalin yara da iyo haweenka iyo waliba marti sharafkale. Munasabadan oo socotay.
Muda kudhaw 6 saacadood ayay dhaamanba Xubnaha kasoqayb galay islameel Dhigeen in wax laga badalo qaab shaqeeedka Jaaliyada iyadoo xubnaha Gudiga cusub ay soo diyaariyeen qaab shaqeeedka mudada ay xilka hayaan Tasoo wax kabadali doonta istiraatijiyadii ay jaaliyadu horay ugu hawl galijirtay.
gaba baadii Gudiga cusub ayaa meel Mariyay Laba Gudi oo midi kashaqayn doono arimaha diplomacy yada iyo xidhiidhka caalamiga Ah halka Gudiga labaad Soo qori doona xeer hosaad ay yeelan doonto Jaaliyada wadan ka Sweden ,is kuso wada duboo kulankan ayaa ahaa mid guul kusodhamaday islamarkana ahaa mid siwanagsan udhacay.